Dagaal khasaare gaystay oo ka dhacay isgoyska KM4, Muqdisho. – Radio Daljir
Dagaal khasaare gaystay oo ka dhacay isgoyska KM4, Muqdisho.
Diseembar 13, 2009 12:00 b 0
Muqdisho, Dec 13 – Xaaladda magaalada Muqdisho gaar ahaanna goobihii lagu dagaallamay ayaa maanta deggan kadib markii xalay fiidkii iyo aroortii hore ee saakayba ay dhaceen dagaallo dad ku dhinteen, kuwo kalana ay ku dhaawacmeen.
Dagaalladaan oo u dhaxeeyey ciidamada dawladda iyo xoogagga hubaysan ee ku kacsan ayaa bilowday kadib markii kooxaha dawladda ku kacsani ay weerar ku qaadeen fariimo ay ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay ku lahaayeen isgoyska KM4 ee magaalada Muqdisho.
Dagaallkii xalay fiidkii dhacay ayaa la sheegay magalada dhinac in ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kale duwan, waxaana ka dhashay khasaarooyin dhimasho iyo dhaawax iskugu jira oo soo kala gaaray labadii dhinac ee dagaallamay iyo dadkii shacabka ahaa ee ka dhawaa goobaha ay wax ka dhaceen.
Dhanka kale dagaal la mid ah midkii xalay dhacay ayaa saakay waabarigii ka qarxay xaafado ka mid ah magaalada Muqdisho, iyadoo si xooggan loo maqlayey dhawaqa rasaasta iyo madaafiicda ay laba dhinac is weydaarsanayaan.
Illaa 8 qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen dagaalladii saakay iyo kuwii xalayba, waxaana saraakiisha caafimaadka ee ka hawlgala cisbitaallada magaalada Muqdisho ay Daljir u xaqiijiyeen in la soo gaarsiiyey dhaawac 12 qof oo ku waxyeelloobay dagaalladaasi.
Warar kuwaasi ka madax bannaan ayaa sheegaya khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawacba in ay intaasi ka badan yihiin oo ay jiraan dad aan wali la soo gaarsiin goobaha caafimaadka kuwaasi oo lagu dabiibayo guryahooda.
Dagaallada u dhaxeeyey dawladda iyo ururrada ku kacsan ee Al-shabaab iyo Xisbu-Islaam, ayaa inta badan ah kuwo si joogto ah uga dhaca magaalada Muqdisho waxaana dagaalladaasi khasaaraha ugu badani uu ka soo gaaraa dadka shacabka ah ee lagu dul dagaallamayo.
?Col. Xasaasi, taliyaha ciidanka bilayska ee Mudug oo aan ka waraysanay weerarkii culimada ee Galkacyo.